Qaar ka mid ah Musharixiinta oo sheegay inay kalsoonidii kala laabteen Guddiga doorashada Jubbaland. | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Qaar ka mid ah Musharixiinta oo sheegay inay kalsoonidii kala laabteen...
Qaar ka mid ah Musharixiinta oo sheegay inay kalsoonidii kala laabteen Guddiga doorashada Jubbaland.
Iyadoo shalay guddiga doorashadadaJubbaland ay soo saareen shuruudo adag oo la hor-dhigay Musharixiinta Madaxweynaha Jubbaland ayaa qaar ka mid ah musharixinta waxaa ay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen Guddiga doorashada.
Qaar ka mid ah musharixiinta oo shir jaraa’id ku qabtay Kismaayo ayaa waxaa ay sheegeen in hebi ahaanba aysan kalsooni ku qabin Guddiga doorashada Jubbaland,isla markaana ay yihiin kuwo ol ole u wada Madaxweynaha Jubbaland.
Pro Cabdiraxmaan Daqare oo ka mid ah Musharixiinta isbeddel doonka ayaa sheegay inay kalsoonidii kala laabteen Guddiga doorashada Jubbaland,isla markaana hadii doorasho ka dhacdo jubbaland natiijadii kazoo baxda aysan aqbali doonin.